musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Germany inoisa rekodhi yeMotokari dzeMagetsi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Germany Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Sustainability News • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Germany inoisa rekodhi yeMotokari dzeMagetsi.
Iyo yezana yeMotokari dzeMagetsi pakati pemotokari dzeGerman dzichangonyoreswa dziri pakakwirira-nguva, zvichishora kukanganisa kwazvino kuindasitiri yemotokari.
Mumwedzi waOctober, kekutanga, motokari dzemagetsi dzakatora 30.4 muzana yezvinyorwa zvitsva zvemotokari muGermany.
Mari yepurofiti yemotokari dzemagetsi parizvino yakakwira zvakanyanya, nekuti nyika yeGerman inopa rubatsiro kutengwa kweEVs inosvika EUR 6000.
Vatengesi vanopa EUR 3000 rebate, izvo zviri kuita kuti vatengi vafunge kuti ikozvino ndiyo nguva yakakodzera yekutenga mota.
Nepo kutengeswa kwemotokari dzakajairwa kwatambura nekushomeka kwekushandisa uye nguva refu yekutumira, maEV ari kubuda mukutengesa muGermany. The German Association of Automotive Industry (VDA) anoti mumwedzi waGumiguru, kekutanga, mota dzemagetsi yakaverengera 30.4 muzana yekunyoreswa kwemotokari nyowani. Izvi zvinokonzerwa nekuchinja kuri kuita musika.
"Tsananguro yacho iri nyore," anodaro Germany Trade & Invest nyanzvi yemotokari Stefan Di Bitonto. "Vagadziri vemotokari vanosarudza rudzi rwemotokari dzavanogovera zvikamu zvakaita semiconductors. The mubereko varikumahombekombe kuti mota dzemagetsi pari zvino dzakakwirira. Imhaka yekuti nyika yeGermany inopa rubatsiro kutengwa kweEVs inosvika EUR 6000. Pamusoro pezvo vatengesi vanopa EUR 3000 rebate, izvo zviri kuita kuti vatengi vafunge kuti ino ndiyo nguva yakakodzera yekutenga mota. Saka zvine musoro kuisa semiconductors muEVs. Munhu wese kumativi ese ari purofiti. "
Nhamba dzinoratidza izvozvo. Motokari 178,700 pamwe chete dzakanyoreswa muGermany muna Gumiguru, kuderera kwemwedzi ne35 muzana. Paiva ne54,400 itsva EV kunyoresa, kuwedzera kwe13 muzana. Uye kunyoreswa kwemotokari dzinotyairwa nemabhatiri (BEVs) kupesana neplug-in mahybrids (PHEVs) kwakakwira nechikamu che32 muzana pamwedzi. Ndiwo maitiro anoita kunge achaenderera mberi munguva pfupi.
"Mienzaniso yeChina neNorway, pamwe neUnited States kusvika kuTesla, inoratidza kuti kana mari yekutenga yehurumende ikaramba ichienderera mberi, nhamba dzekutengesa nekunyoresa dzeEVs dzichabudirira," anodaro Di Bitonto. "Ichi chikamu chemusika wemotokari chinoshingirira kupa kushomeka nekuti vagadziri vemotokari vacharamba vachishandisa zvikamu zvavanazvo kuvaka mota dzinopa mari zvakanyanya."
Nhamba dzepamwedzi dzinouya pakati pekuputika kukuru kwemukurumbira muEVs muGermany. Mota yemagetsi kunyoreswa kanopfuura katatu, kubva pa63,281 kusvika 194,163, kubva 2019 kusvika 2020, sekureva kwehurumende yeGerman agency KBA. Uye 115,296 EVs akanyoreswa kubva muna Ndira kusvika Chivabvu wegore rino chete.
"Zviri pachena zvakare kuti kugamuchirwa kweEVs muGermany kuri kukura," Di Bitonto anowedzera. “Kusimbisana. Vanhu vari kutenga maEV izvozvi nekuti zvine mutsindo kuzviita, asi kuwedzera kwehuwandu hweEVs mumigwagwa kuchawedzera mukurumbira wavo zvisinei nekushomeka kwazvino. ”